Gddoomiyaha G/Shabeelada Hoose oo la kulmay maamulka Deegaanka Buulo-Mareer | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Gddoomiyaha G/Shabeelada Hoose oo la kulmay maamulka Deegaanka Buulo-Mareer
Gddoomiyaha G/Shabeelada Hoose oo la kulmay maamulka Deegaanka Buulo-Mareer
Kulankani oo looga hadlayay sidii la isaga kaashan lahaa xoojinta amaanka ayaa ka dhacay Deegaanka Buulo-Mareer ee Gobolka Shabeelada Hoose,iyadoo ay ka qeybgaleen mas’uuliyiin saraakiil iyo qeybaha bulshada.
Guddoomiyaha Gobolka Shabeelada Hoose Ibraahim Aadan Cali (Najax) oo ay wehliyaan saraakiil katirsan ciidanka Xoogga Dalka oo ku sugaan deegaanadaasi ayaa gaarey deegaanka Buulo-Mareer halkaasi oo kulankan uu ku dhexmaray isaga, maamulka deegaanka iyo bulshada halkaasi kunool.
Guddoomiyaha ayaa saraakiisha iyo maamulka ka dhageystay warbixino ku aadan xaaladaha guud ee ahniga deegaankaasi,iyo baahiyaha dhanka adeegyada bulshada,waxaana siweyn looga hadlay sidii shacabka iyo maamulka ay ciidamada ugala shaqeyn lahaayeen xaqiijinta amniga iyo ka hortaga dhagaraha cadowga umadda Soomaaliyeed ee Shabaab.
Ibraahim Aadan Cali Najax guddoomiyaha Gobolka ayaa maalmahan waxaa uu kormeer uu ugu kuurgal;aya xaaladaha guud ee amniga iyo dhaq dhaqaaq bulshada ku marayay qaar kamid ah deegaanada Gobolka Shabeelada Hoose.
Dhanka kale wefdiga guddoomiyaha ayaa gaarey deeganka Golweyn waxaana safarka u ujeedkiisu yahay ukuurga, ka xaaladaha deegaanada Gobolka.
Previous articleMadaxda Wasaaradda Warfaafinta oo ka tacsiyadeeyay Geeridii ku timid Suxufi caan ah
Next articleAkhriso Wareegto Maamulka Gobolka Banaadir uu ka soo saaray Gawaarida xamuulka